Mareykanka Oo Ka Xun Xukunkii Lagu Riday Gabar Sheegtay In La Kufsaday iyo Labo Weriye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka Oo Ka Xun Xukunkii Lagu Riday Gabar Sheegtay In La Kufsaday iyo Labo Weriye
12th December 2013 A warsame Af Soomaali 0
Washington, Mareeg.com: Mareykanka ayaa sheegay inuu ka xumaaday xukun dhawaan maxkamadda gobolka Banaadir ku riday gabar sheegtay in la kufsaday iyo weriye wareystay.
War ka soo baxay wasaaradda Arimaha Dibadda ee Mareykanka, gaar ahaan laanta arimaha Africa ayaa lagu sheegay in Mareykanku aad uga niyad jabay xukun ku dhacay gabar sheegtay in la kufsaday.
“Waxaan si qotadheer uga niyad jabnay eedeynta loo jeediyey dhibanaha sheegtay in la kufsaday” sidaa waxaa AFP u sheegay Will Stevens oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka, laanta Afrika.
Mareykanka ayaa dowladda Soomaaliya usoo jeediyey in la difaaco dhibanayaasha, islamarkaana cadaaladda la horkeeno kiuwii fal dambiyeedka geystay sida warka loo dhigay.
“Xukunkaani wuxuu su’aaal gelinayaa sida loo difaacayao dadka la kulma xadgudubyada jinsiga la xiriira iyo xorriyada saxaafadda” ayuu sidoo kale yiri Stevens oo tilmaamay in sidoo kale uu dad badan ka hor istaagayo iney soo gudbiyaan kiisaska kufsiga ah.
Mareykanka ugu baaqay dowladda Soomaaliya iney difaacdo dumarka, islamarkaana tixgeliso madax banaanida warbaahinta.
9-kii bishaan December 2013 ayaa maxkamadda gobolka Banaadir xukunno ku riday Milkiilaha Shabeelle, gabar sheegtay in la kufsaday iyo weriye wareystay gabadhaas.
Weriye Maxamed Bashiir iyo gabadha sheegtay in la kufsaday oo lagu magacaabo Fadumo C/qaadir ayaa lagu eedeeyey iney been abuureen kufsi, iyadoo gabadhu ku doodeyso in la kufsaday, weriyuhuna ku doodayo inuu wareystay iyadoo sheegtay in kufsi loo geystay.
Maxamed Bashiir Xaashi iyo Faadumo C/qaadir ayaa sidoo kale lagu eedeeyey iney ku been abuurteen weriye ka shaqeeya Radio Muqdisho iyo sawir qaade ka tirsan TV-ga qaranka SNTV.
Guddoomiyaha Maxkamada Gobalka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur ayaa ku dhawaaqay go’aanka dacwadda, waxaana Cabdi Maalik lagu xukuma xarig sanad ah oo uu iibsan karo.
Weriye Maxamed Bashiir Xaashi ayaa lagu xukumay 6 bilood oo xarig 1 sano xarig uu iibsan karo, halka gabadha sheegtay in la kufsaday lagu xukumay 6 bilood debad joog ah.
Dagaal Beeleed Ka Dhacay Hiiraan Oo Sababay Dhimasho Iyo Farabadan